GADZIRISA DHCP HAINA KUBVUMIDZWA YEWIFI MUKATI WINDOWS 10 - NYORO
Gadzirisa DHCP haina kubvumidzwa yeWiFi mukati Windows 10
Kana iwe usingakwanise kubatana neinternet kana kutarisana nedambudziko rekubatanidza internet dambudziko, saka mikana ndeye DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Mutengi anogona kunge akaremara. Kuti usimbise izvi, mhanyisa network yekuongorora uye iyo yekugadzirisa matambudziko ichavhara nekanganiso meseji DHCP haina kupihwa simba kune WiFi kana DHCP haina kupihwa simba kune Wireless Network Kubatana.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) inetiweki protocol iyo inodzorwa neDHCP server iyo inogovera zvine simba maratidziro ekugadzirisa maratidziro, senge IP kero, kune vese vatengi veDHCP-inogoneswa. DHCP server inobatsira mukuderedza kudikanwa kwemubatiri maneja kumisikidza aya marongero nemaoko.
Iye zvino muWindows 10, DHCP inogoneswa nekutadza, asi kana yakaremara nemamwe ma3bato maapplication kana pamwe hutachiona ipapo yako Wireless yekuwana nzvimbo haizomhanye server yeDHCP, iyo zvakare isingazogone kupa IP kero uye iwe wakunda havazokwanise kuwana internet. Saka pasina kutambisa chero nguva ngatione kuti Gadziriso DHCP haina kupihwa simba muWiFi muWindows 10 nerubatsiro rwepazasi-yakanyorwa gadziriso yekugadzirisa.
Maitiro 1: Mhanya Network Troubleshooter
Maitiro 2: Gonesa DHCP kuburikidza Network Adapter Zvirongwa
Maitiro 3: Gonesa DHCP mutengi sevhisi
Maitiro 4: Kwechinguva Dzora Antivirus uye Firewall
Maitiro 5: Uncheck Proxy
Maitiro 6: Dzorerazve Winsock uye TCP / IP
Maitiro 7: Dzorerazve yako Network mutyairi
Maitiro 8: Gadziridza Wireless Adapter madhiraivha
Maitiro 9: Mhanya CCleaner uye Malwarebytes
Ita shuwa ku gadzira yekudzorera poindi kungoitika kana chimwe chinhu chikatadza kufamba.
Mushure meimwe neimwe nzira, ita shuwa yekutarisa kana iyo DHCP inogoneswa kana kwete, kuti uite izvo zvinotevera gwara iri.
1. Vhura Raira Kukurumidza . Mushandisi anogona kuita nhanho iyi nekutsvaga ‘Cmd’ wobva wadzvanya Enter.
Nyora unotevera kuraira mu cmd uye rova ​​Enter:
ipconfig / zvese
3. Mupumburu pasi Wireless LAN adhaputa Wi-Fi uye pasi DHCP Yakagoneswa inofanira kuverenga Ehe .
4. Ukaona USA pasi peDHCP Yakagoneswa, ipapo nzira yacho haina kushanda, uye unofanirwa kuyedza dzimwe mhinduro zvakare.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wanyora ncpa.cpl uye rova ​​Enter kuti uzarure Network Connections.
2.Kenya-kurudyi paWifi yako Kubatanidza uye sarudza Ongorora.
3. Rega iyo Network Troubleshooter imhanye, uye ichakupa inotevera yekukanganisa meseji: DHCP haina kubvumidzwa kune Wireless Network Kubatanidza.
4. Zvino tinya pane Inotevera kuti gadzirisa nyaya. Zvakare, tinya pane Edza Izvi Kugadziridza seMutungamiriri .
5. Pane rinotevera kukurudzira, tinya Isa izvi gadzirisa.
6. Dzorera PC yako kuti uchengetedze shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa DHCP haina kubvumidzwa yeWiFi mukati Windows 10.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wanyora ncpa.cpl ndokurova Enter.
ligi yenyaya inononoka kugadzirisa kumhanya kugadzirisa
2.Kenya-kurudyi paWifi yako Kubatanidza uye sarudza Zvivakwa.
3. Kubva paWi-Fi zvivakwa hwindo, sarudza Internet Protocol Shanduro 4 uye tinya Zvivakwa.
4. Zvino ita chokwadi cheki Wana IP kero otomatiki uye Tora DNS server kero otomatiki.
5. Dzvanya Zvakanaka , wobva wadzvanya zvakare pane OK wobva wadzvanya Vhara.
6. Dzorera PC yako kuchengetedza shanduko.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wanyora services.msc ndokurova Enter.
2. Tsvaga Mutengi weDHCP mune iyi runyorwa wobva wadzvanya kaviri pairi kuti uzarure zvivakwa zvayo.
3. Iva nechokwadi Startup mhando yakagadzirirwa kuAutomatic uye tinya Kutanga kana sevhisi isiri kutomhanya.
4. Dzvanya Nyorera, uchiteverwa neOK.
5. Tangazve PC yako kuchengetedza shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa DHCP haina kubvumidzwa yeWiFi mukati Windows 10.
Dzimwe nguva chirongwa cheAntivirus chinogona kukonzera kukanganisa uye kuti uone kuti izvi hazvisizvo pano, unofanirwa kuremadza antivirus yako kwenguva yakati rebei kuti iwe ugone kutarisa kana iko kukanganisa kuchiri kuoneka kana antivirus yadzimwa.
1.Kenya-kurudyi pane iyo Antivirus Chirongwa icon kubva ku system tray uye sarudza Disable.
2. Tevere, sarudza nguva yakatarwa iyo iyo Antivirus icharamba yakaremara.
Ongorora: Sarudza iyo diki diki yenguva inogoneka semuenzaniso maminetsi gumi nemashanu kana makumi matatu maminitsi.
3. Kana wapedza, edza zvakare kubatanidza kuti uzarure Google Chrome uye tarisa kuti kukanganisa kwacho kunogadzirisa here kana kuti kwete.
4. Tsvaga panhare yekudzora kubva kuKutanga Menyu yekutsvaga bar uye tinya pairi kuti uvhure iyo Kudzora Panel.
5. Tevere, tinya pa System uye Chengetedzo wobva wadzvanya pa Windows Firewall.
6. Zvino kubva kuruboshwe hwindo pane tinya Dzorera kana kudzima Windows Firewall.
7. Sarudza Bvisa Windows Firewall uye wotangazve PC yako.
Zvekare edza kuvhura Google Chrome uye shanyira iyo peji rewebhu iro raive rataridza an kukanganisa. Kana nzira iri pamusoro ikasashanda ita chokwadi chekutevera chaiwo matanho akafanana ku batidza Firewall yako zvakare.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wanyora inetcpl.cpl ndokurova kupinda kuti uvhure Internet Zvivakwa.
2. Tevere, Enda ku Kubatanidza tebhu uye sarudza LAN marongero.
3. Uncheck Shandisa Proxy Server yeLAN yako uye uve nechokwadi Otomatiki ona marongero inotariswa.
wedzera gpedit kumahwindo gumi kumba
4. Dzvanya Ok uye Nyorera uye reboot PC yako.
2. Zvakare, vhura Admin Command Prompt uye nyora zvinotevera uye rova ​​pinda mushure meumwe neumwe:
3.Kutangazve kuisa shanduko. Netsh Winsock Reset rairo inoita kunge Gadzirisa DHCP haina kubvumidzwa yeWiFi mukati Windows 10.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wanyora devmgmt.msc ndokurova Enter.
2.Wedzera Network adapters wobva wadzvanya-kurudyi pane yako WiFi adapter uye sarudza Uninstall.
3. Dzvanya zvakare Uninstall kuitira kusimbisa.
4. Ikozvino tinya-kurudyi Network Adapter uye sarudza Shandisa scan shanduko.
5.Reboot PC yako uye Windows vachangoerekana gadza default vatyairi.
2.Kenya-kurudyi pane iyo waya isina adapta pasi peNetwork Adapter uye sarudza Gadziridza Mutyairi.
3. Sarudza Bhurawuza komputa yangu kune mutyairi software.
4. Zvekare tinya pa Rega nditore kubva pane runyorwa rwevatyairi varipo pakombuta yangu.
5. Sarudza yazvino mutyairi aripo kubva pane runyorwa uye tinya Next
1. Dhawunirodha uye gadza CCleaner & Malwarebytes.
2. Mhanya Malwarebytes uye rega itarise system yako kumafaira anokuvadza. Kana malware ikawanikwa inozoabvisa otomatiki.
3. Zvino mhanya CCleaner uye sarudza Tsika Yakachena .
4. Pasi Petsika Yakachena, sarudza iyo Windows tab wobva waita chokwadi chekutarisa mamaki uye tinya Ongorora .
5. Kamwe Ongororo yapera, ita shuwa kuti iwe une chokwadi chekubvisa mafaera kuti abviswe.
6. Pakupedzisira, tinya pane iyo Mhanyai Kuchenesa bhatani uye rega CCleaner imhanye nzira yayo.
7. Kuti uenderere mberi nekuchenesa system yako, Sarudza iyo Registry tebhu , uye chengetedza zvinotevera zvinotevera.
8. Dzvanya pa Skena Matambudziko bhatani uye bvumira CCleaner kuongorora, wobva wadzvanya pane iyo Gadzirisa Yakasarudzwa Nyaya bhatani.
9. Kana CCleaner abvunza Iwe unoda backup backup kune iyo registry? sarudza Hungu .
10. Kana backup yako yapedza, tinya pane iyo Gadzirisa Dzese Nyaya Dzakasarudzwa bhatani.
11. Tangazve PC yako kuchengetedza shanduko.
Gadzirisa Steam Error Yakundikana kutakura steamui.dll
Chinja Template yeDrive, Folder, kana Raibhurari muWindows 10
Gadzira Haigone Kubatanidza kune Iyo Steam Network Kanganiso
Gadzirisa Windows 10 Yakashata Clock Nguva Nyaya
Ndikwo iwe wakabudirira Gadzirisa DHCP haina kubvumidzwa yeWiFi mukati Windows 10 asi kana iwe uchine chero mibvunzo zvine chekuita negwara rino saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
Ungachinja sei Default OS muDual-Boot Setup
Kana iwe uchida kuchinja default OS mune Dual-Boot setup saka iwe wauya kurudyi nzvimbo. Iwe unogona kushandura zviri nyore iyo default inoshanda sisitimu uchishandisa GUI inte
Network Adapter Mutyairi Nyaya, Zvekuita?
Network Adapter Dhivha Matambudziko? Kana iwe uri kutarisana nemuganhu wekubatanidza internet kana kushaya internet ipapo dambudziko rinokonzereswa nekuda kwevatyairi vakashata
Nzira Yokuwana Nayo Kutanga Kutanga Sarudzo muWindows 10
Dzvitsa Desktop Background Image mukati Windows 10
5 mhinduro dzekugadzirisa Netflix app isiri kushanda pamawindows 10
Dhawunorodha Windows 10 Shanduro 20H2 ISO, Yakananga kubva kuMicrosoft server
Maitiro Ekutsvaga Mumwe Munhu Pane Facebook Uchishandisa An Email Kero
Maitiro Ekubvisa Pasiwedhi kubva kuExcel Faira
Maitiro ekugadzirisa Voicemail isiri kushanda pane Android
Ungachinja sei Autosave nguva muIzwi
Sei Hack Android Games Pasina Root
3 Nzira dzekuwana Yako Yakarasika Android Runhare
iTunes haishande pamawindows 10
DVD yekusaverenga windows 10
windows 10 hatina kukwanisa kupedzisa izvo zvekugadzirisa zvichichinja shanduko
bluetooth pamahwindo gumi asipo
windows 1809 midhiya yekugadzira chishandiso
windows 10 bvisa kunyora kwekudzivirira
dzima windows inogadziridza windows windows 10 kumba